कोरोनाको आवरणमा राजनीतिक खेल ? - Jhilko
सिधा हेर्दा कोरोना भाइरस संक्रमणको सम्भावित जोखिमको पूर्वतयारी वा सजगताका लागि भनिए पनि अन्ततः कोरोना भाइरसको निहुँमा देशलाई अनायासै अर्काेतिर मोड्ने अभ्यास त भएको होइन ?
सारा विश्व कोरोनाको संक्रमणले गाजिएका बेलामा पनि नेपालमा यसको एकजनासम्म विरामी नभेटिनु जत्ति धेरै सुखद पक्ष हो, त्यति नै कोरोनाको आतङ्क सिर्जना गरेर देशलाई ठप्प र बन्द गर्ने सरकारी निर्णय आफैंमा राजनीतिक स्वार्थ गाँसिएको खतरनाक कदम त होइन ?
देशको सरकार प्रधानमन्त्री केपी ओलीको विरामीसँगै ओछ्यान परेको छ । सरकार ओछ्यान परेको मौकामा कोरोनाको सम्भावित संक्रमण नै देशलाई अप्रत्यासित रुपमा लकडाउन गर्ने सहज अस्त्र बनेको छ । सरकारले स्कूल, कलेज, सिनेमा घर, सभा जुलुस, सम्मेलन, भेटघाट सबैमा एक्कासी प्रतिवन्ध लगाएको छ । मानौं देशमा ठूलै संकट आएको अवस्था झैं गरी सरकार देशलाई लकडाउन गर्ने दूरगामी निर्णयमा पुगेको छ । परीक्षाको १२ घण्टाअघि मात्रै एसईईको परीक्षा स्थगनदेखि विश्वविद्यालयका पढाई र परीक्षा सरकारले बन्द गरिदिएको छ । सबै निर्णयहरु सरकारका भनिएको छ तर कुनै पनि निर्णय मन्त्रीपरिषदको वैठकबाट भइरहेका छैनन् ।
उपप्रधान तथा रक्षामन्त्री ईश्वर पोखरेल नेतृत्वको एक समितिले हठात यति ठूला निर्णयहरु गरेर सरकार कोरोना रोक्न दुई कदम अगाडि रहेको सन्देश प्रवाह गर्न खोजिएको छ । जबकि देशमा कोरोनाको संकट आएको नै छैन । संकट नआउँदै सरकारले सावधानी अपनाउने बाटो छाडेर देशको सबैथोक बन्द गरिदिने सहज बाटो पक्रेको छ ।
आखिर सरकारले यी गंभिर प्रकृतिका, दूरगामी महत्वका निर्णयहरु गर्दा किन ईश्वर पोखरेल नेतृत्वको समितिलाई नै सर्वेसर्वा मानेर निर्णय लियो ? पोखरेल नेतृत्वको समितिले गरेका निर्णय कति व्यावहारिक र कति देश तथा जनताको लागि हितकारी छन् ? यी निर्णयहरु कुन संवैधानिक जग र कानुनी आधारबाट भइरहेका छन ? देशलाई लकडाउन गर्ने निर्णय संकटकाल घोषणा गरेर गर्नुपर्ने होइन ? संकटकाल घोषणा गर्न मन्त्रीपरिषदले परिस्थिति अध्ययन गरी निर्णय लिने र राष्ट्रपतिबाट अनुमोदन र घोषणा गराउने संवैधानिक बाटो र प्रवन्धलाई यो सरकारले किन नजरअन्दाज गरिरहेको छ ?
भोलि प्रधानमन्त्रीको स्वास्थ्य अझै राम्रो हुदै नजाने, कोरोनाको त्रास पनि निकै लम्विदै जाने हो भने देश नै लकडाउन गर्ने सरकारी निर्णय कतिन्जेल जारी रहने ? राज्यले सबैतिर बन्द गर्ने तर विकल्प नदिने वर्तमान शैलीले भोलि अघोषित रुपमा सेना वा सुरक्षाकर्मी मात्रै शक्तिशाली र हावी हुने कुरा निश्चित छ । यस्तो बेलामा के देश औपचारिक रुपमा नभनीकनै सैनिकीकरणतर्फ अघि बढ्ने छैन ?
रक्षामन्त्री समेत रहेका ईश्वर पोखरेलको समितिले दुरगामी प्रभाव पार्ने सबैतिर लकडाउनको निर्णय लिदा किन सम्बन्धित सरोकारवालाहरुसँग परामर्श गरेन ? यसको वैधानिक विधिलाई किन अङ्गिकार गरेन ? राष्ट्रपतिलाई सक्रिय गराउन यी सबै कदमहरु अप्रत्यक्ष रुपमा उक्साउने काम होइनन् भनेर कसरी विश्वास गर्ने ?
नेपालमा आउँदै नआएको कोरोनाको त्रास देखाएर सबैलाई भयवित र आतङ्कित पार्ने अनि अस्वस्थ प्रधानमन्त्रीले केही गर्न सक्ने अवस्था नरहेकोले राष्ट्रपतिलाई नै सक्रिय पार्न चाहने तत्वको डिजाइनमा नै यी कामहरु भइरहेका त होइनन् ? देश लकडाउन हँुदा यसले देशको चलायमान अर्थतन्त्र ध्वस्त पार्ने, जनता मारमा पर्ने र त्यसलाई निकास दिन राष्ट्रपति सक्रिय भई सेनालाई स्थिति सहज बनाउने नाममा सेना परिचालन गर्ने दिशामा नै देशको राजनीति लगिदै गरेको त होइन ?
यो पनि पढ्नुहोस यसरी कति दिन चल्छ देश ?
देशमा कोरोना भाइरसको सम्भाव्य सङ्क्रमण रोक्न सरकारी तदारुकता आवश्यक थियो र रहन्छ । तर सरकारले लिने कदमहरु एक एक असर र प्रभावको वस्तुगत अध्ययन र मूल्याङ्कनका आधारमा गरिनुपर्ने हो । तर यहाँ त हचुवाका भरमा अब लौ सबै भन्दै सबैजना घरघरमा बस्ने भनेर सरकारी समितिले हुकुमी शैलीमा आफ्ना निर्णयहरु लादिरहेको छ ।
सरकारले सम्भावित जोखिम कम गर्न उपचार केन्द्रहरु बढाउन नसक्ने, तर सेनाले वैकल्पिक व्यवस्थाका सबै प्रारुप तयार पार्ने कदमले सेना प्रत्यक्ष जनतासँग कोरोनाको संकटकै बहानामा जोडिदै र नजिकिदै जाने परिस्थिति खडा गर्न खोजिदैं त होइन ? सेनाका व्यारेकहरु रोगको आक्रमण भए उपचार गराउन तम्तयार रहन सक्दा सरकार नियन्त्रित देशभरका अस्पताल र प्रदेश तथा स्थानीय सरकार निस्क्रिय प्रायः देखिन्छन । यसले संकटका बेला जनता सेनाको वरिपरि गोलवन्द हँुदै जाने र जनता तथा स्थानीय र केन्द्र सरकारको सम्बन्धमा दुरी बढ्दै जाने स्थिति बन्दैछ ।
देशको रक्षा गर्ने सेनाले संकटको सामना गर्न यस्तो अवस्थामा तयारी हालतमा रहनु पक्कै पनि मानवीय र व्यावसायिक रुपमा पनि राम्रो काम हो । तर, सरकार चाहिं कमजोर र सेना चाहि सक्रिय र कामकाजी देखिनु भनेको सेना अघिअघि र सरकार पछिपछि हुनु नै हो । जनउत्तरदायी सरकारले कोरोनाको सम्भावित संक्रमणको नाममा यसरी सेना अघिअघि, सरकार पछिपछि लाग्ने परिस्थिति तयार गर्नु अन्ततः सरकारको लागि घातक कदम हुनेछ । हुनुपर्ने सरकार अघिअघि र सेना तथा राज्यका अरु अङ्ग पछिपछि हुनुपर्ने हो ।
कोरोनाको त्रास र आतंकका माझ सरकारले जनतालाई मास्क, सेनिटाइजर जस्ता सामान्य सामान पनि सहायता गर्न सकेन । यसले जनताबीच सङ्कटमा सरकार हाम्रो साथ रहेन भन्ने भान आम रुपमा पारेको छ । त्यसमाथि दैनिक उपभोग्य वस्तुको कृत्रिम अभाव र कालोबजारी पनि सरकारले नियमन र नियन्त्रण गर्न सकेन । यसले पनि जनतामा सरकार जनताका लागि काम लाग्दो र नजिकको संकटको साथी बन्न सकेन भन्ने जनमानसमा परेको छ । यस्तो स्थितिमा जनताका लागि सरकार टाढाटाढाको परिस्थिति बन्दै छ ।
राजनीतिक रुपमा संसद नै स्थगित भएपछि संसदीय काम कारवाहीहरु पनि प्रभावित छन । संसदको यसै अधिवेशनबाट एमसीसी पारित गराउने प्रधानमन्त्रीको घोषणा कार्यान्वयन हुने सम्भावना कमजोर हुँदै गएको छ । सीमा समस्याको कुरा त अब पूरै ओझेलमा परिसकेको छ । गल्दै गएको प्रधानमन्त्रीको शरीरिक स्वास्थ्यले सरकारको छवि पनि जनतामा ढल्दै गरेको देखाउँदैछ ।
सत्तारुढ दल नेकपाका लागि वर्तमान सरकार नखाउ भने दिनभरको शिकार, खाउँ भने खै के जातिको अनुहार भने जस्तो भइरहेको प्रतित हुन्छ । विरामी प्रधानमन्त्रीलाई आराम गर्ने वातावरण बनाएर अगाडि बढ्नुपर्ने बेलामा उल्टो प्रधानमन्त्रीलाई धपेडीमा राखेका छन । यो सबै परिस्थितिले असामान्य दुर्घटनालाई संकेत गरिरहेको स्पष्ट छ । कार्यकारी प्रमुखको स्वास्थ्यमा समस्या देखिएपछि अन्य नहुनुपर्ने पक्ष सक्रिय हुँदा राजनीतिक दुर्घटनाको आधार बन्दै त छैन ?
माधव नेपालको तेस्रो वरियता झलनाथ खनाललाई
नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) को आइतबार साँझ बसेको सचिवालय बैठकले जनवर्गीय संगठनहरुका...
'मन्त्रीमण्डल फेरबदल प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको क्षेत्राधिकारको...
प्रचण्डको सचिवालयले मन्त्रीहरूका विषयमा प्रचण्डलाई जोडेर विभिन्न सञ्चारमाध्यममा...